Bolivia: Mitaky Fanadihadiana Momba Ny Famoretana Natao Tamin’ireo Indizeny Ny Minisitra Teo Aloha · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraPablo Andrés Rivero
Nandika (en) i Pablo Andres Rivero
Voadika ny 16 Septambra 2012 11:32 GMT
Vakio amin'ny teny Aymara, Dansk, English, Français, Español
Nandao ny kabinetran'ny filoha Evo Morales ity minisitra teo aloha tanora ity ora iray monja taorian'ny nivoahan'ny vaovao momba ny fanafihana an-kerisetran'ny polisy nandritra ny Diabe faha-8 nataon'ny Indizeny ho fiarovana ny Vala-javaboahari-pirenena sy ny Sisintanin'ny Indizeny Isiboro Secure (TIPNIS amin'ny teny espanola) tamin'ny 25 Septambra 2011.
Navoakan'i Chacón izany fanamarihana izany raha voatendry ho ambasadaoro maharitra eo anivon'ny Firenena Mikambana (ONU) ao New York i Sacha Llorenti, Minisitry ny Atitany teo aloha. Nandritra ny fanafihan'ny polisy ny diaben'ny Indizeny, nandray ny andraikiny Andriamatoa Llorenti amin'ny maha lehiben'ny polisy azy sy amin'ny maha manam-pahefana tompon'andraikitra mivantana azy momba ny fiarovana.
Naotin'i María Cecilia Chacón ao amin'ny Facebook
Ao anatin'ireo fanamarihana mendrika holazaina ny nilazan'ny minisitra teo aloha Chacón hoe:
Efa ho herintaona sahady izao ny famoretana mahamenatra niseho tao Chaparina, zaza amam-behivavy no niharan'ny herisetra tamin'izany andro izany. Ary mbola tsy nisy ny fanasaziana izany zava-nitranga izany hatramin'izao.
Inona no tena zava-dehibe? Iza no namolavola ny tetika? Iza no nanome alalana hanao izany? Iza no nampihatra azy? za no faly sy nitehaka fa tontosa “tsara sy tsy nisy naratra” ny tetika?
Zava-dehibe avokoa ny zava-drehetra hitantsika, saingy ny tsy hitantsika no tena zava-dehibe indrindra. Nahita maso izay nitranga isika, saingy mbola tsy nahita maso ny fandavan-tenan'ny governemanta hanonitra ny fahavoazana isika.
Hoy izy nilaza somary lalindalina:
Tsy anjaran’ny antoko politika iray ihany na an'ny manam-pahaizana “mahiratra” ny mitondra fanovana. Ny revolisiona tena izy, dia tsy manana fironan'antoko, fa an’ny vahoaka rehetra. Tsy misy olona tokony heverina ho “vahiny nasaina” ao anatin'ny fanatontosana ny zavatra atao, ary tsy misy olona tokony hihevitra ny tenany ho lehibe mihoatra ny namana hafa. Natanjaka isika satria nivondrona, ary niray hina. Ary ankehitriny, manan-jo sy andraikitra hiaro ny fananantsika isika, tsy maintsy mitolona isika hanavotra izany.
Naneho hevitra avy hatrany tamin’ny alalan’ny tambajotra sosialy sy ny bilaogy ny olom-pirenena , nitondra fanohanana sy nangataka fanazavana tamin’ny fanjakana ny amin’ny andraikitry ny manampahefana sy ireo nanapa-kevitra nandritra ny famoretana ny diaben’ny vahoaka indizeny.
Fausto, mpiserasera iray tsy fantatra anarana, naneho hevitra [es] tao amin’ny bilaogin’i Rimay Pampa [es]:
Ity taratasy ity no tena tsotra, mazava, mandresy lahatra, be herim-po, matotra ary manaja indrindra, tsy kabary na sandoka na avy amin’ny olona lazaina ho marani-tsaina mila sitraka.
Nanao ny mety izy tamin'ny fialany tamin'ny andraikiny, mitazona ny etikany sy ny fisainany tsy misy romborombony.
Ankasitrahanay tanteraka fa noazavazavainy ny zavatra tian'ny Boliviana mahatsiaro tena holazaina.
Etsy andaniny, nisy nitsikera ny fanamarihana. Rocio Llobet (@rociolloret) [es] naneho hevitra tamin’ny alalan’ny kaonty Twitter-ny:
@rociolloret [es]: Hendry loatra ny minisitra teo aloha Chacón, fantany tsara fa ho ampiasan’ny mpanohitra ny taratasiny, nefa hafa ny olana miseho.
Ingrid Barrientos [es] kosa naneho hevitra tao amin’ilay fanamarihana navoaka tao amin’ny Facebook ihany [es]:
Tsy irery ianao, ny herim-ponao dia herim-pon'ny ankamaroanay ihany koa. Nasehonay ny herim-ponao ary hotohizanay izany. Zava-dehibe ny fandrisihanao ho amin’ny fahamendrehana, sady tsy avy ao amin’ny ankavanana isika no tsy ao amin’ny ankavia, fa maniry fanovana ao amin’ny firenentsika Bolivia izay tsy maintsy miainga miaraka amintsika! Na manana fahamendrehana ianao na tsia, izay no izy.